Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nkwari akụ na nkwari akụ » Uru ụlọ nkwari akụ na -arị elu, mana ọ ga -adịgide otu ahụ?
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa ozi China • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Industrylọ ọrụ ụlọ nkwari akụ ahụ ka na -emebi emebi, na -agbanahụ ihe mgbochi ọ bụla tụbara ya.
Ụlọ ọrụ ụlọ oriri na nkwari akụ US na -aga n'ihu na -ahụ ịrị elu ego ha na -enweta.
Na Europe, arụmọrụ ụlọ nkwari akụ na -aga n'ihu na -agbada ala.
N'Eshia, arụmọrụ ụlọ ọrụ nkwari akụ China na -agbanwe agbanwe.
Ọrụ ụlọ oriri na ọ Globalụ Globalụ zuru ụwa ọnụ na -akawanye mma kwa ọnwa. Nke ahụ bụ ozi ọma. Nchegbu ka njọ bụ ma ọ bụrụ na ọ ga -adịgide otu ahụ. Industrylọ ọrụ ụlọ nkwari akụ ahụ ka na -emebi emebi, na -agbanahụ ihe mgbochi ọ bụla tụbara ya.
Ọkpụkpụ ọhụrụ bụ ihe dị iche iche Delta, nke mere ka ikpe COVID gbasaa n'ọtụtụ mpaghara wee tụba oghere n'ime nwayọọ nwayọọ. Naanị n'izu a, European Union tụrụ aro ka amachibido ndị America na njem na -adịghị mkpa na steeti ndị otu ya mgbe ịrị elu nke ikpe na US Nke a ka US na -egbochi oke maka ọtụtụ ndị njem Europe.
N'agbanyeghị nke ahụ, ụlọ ọrụ nkwari akụ na -aga n'ihu.
Ọ bụ ezie na mpaghara niile nwere oge tupu ha ejiri ọnụọgụ ọnụọgụ oria afọ 2019 wee pụta, nkwalite kwa ọnwa na-agba ume. Ndị USA na -aga n'ihu na -ahụ ịrị elu ego ya: RevPAR na July 2021 karịrị $ 20 karịa ọnwa gara aga ma ugbu a karịrị 1,000% karịa ka ọ dị na Eprel 2020, onye nadir nke arụmọrụ ụlọ nkwari akụ.
Ọnụọgụ ndị mmadụ rịrị elu ruo 60% n'ọnwa, na -enyere aka nweta mmanụ ọkụ na ego ha nwetara n'ụlọ nkwari akụ. Ka ọ dị ugbu a, ọrụ na -aga n'ihu, mana dịka ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ọkachasị n'ahịa ebe a na -eme mkpọtụ, ịkwụ ụgwọ na -arịwanye elu. Tụlee Miami Beach: Mkpokọta ịkwụ ụgwọ ruru $ 92 n'otu ọnụ ụlọ dị na July 2021, naanị $ 18 kwụsịrị ọkwa July 2019 yana 143% karịa karịa n'otu oge n'afọ gara aga.
Ego mbata dị elu na -enyere aka ịba uru dị ukwuu na -arụ ọrụ, US na -akụ $ 67 n'ọnwa, belata 18% n'otu oge na 2019.
Ọnụ ego ịrị elu EU Vax
Na Europe, ebe na EU ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu karịa US, arụmọrụ ụlọ oriri na ọ continuesụ continuesụ na -aga n'ihu na -agbachasị ala. Agbanyeghị, nke ahụ nwere ike gbanwee n'ihi mwepụta nke ịgba ọgwụ mgbochi, nke kwalitere echiche na kọntinent niile site na ndị njem na ndị na -etinye ego.
Middle East adịghị akwụ ọtọ
Mgbe uru gbadara na February 2021 na June 2021, GOPPAR gbalitere na July, na -akụ $ 29, naanị 11% kwụsịrị ọkwa Julaị 2019 yana karịa 1,900% dị elu karịa na Julaị 2020, mgbe GOPPAR tụgharịrị adịghị mma.
Usoro mbata ego na -egosipụtakarị usoro uru, ngwaahịa nke njikwa mmefu ego na -achịkwa, nke hụrụ ọnụọgụ ịkwụ ụgwọ na -agbada mgbe ọ gbasasịrị na February nke nyere aka mee ka mbelata uru ahụ.
China na -edu
Na Asia, ChinaArụmọrụ ya agbanweela. GOPPAR gbagoro elu mgbe omimi ya kacha njọ na February. Ugbu a, ka ọnwa Julaị 2021 dị, GOPPAR dị elu karịa $ 2 karịa ka ọ dị na Julaị 2021, ọmarịcha ihe ịtụnanya na ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara site na eziokwu pụtara na ikpe COVID na mba ahụ agbadala ruo ihe efu mgbe COVID nwesịrị.